प्रवास, कला तथा साहित्य || Radio Mugu
खबर सेरोफेरो आजको बिशेष पश्चिम नेपाल अन्तरवार्ता तथा बिचार प्रवास, कला तथा साहित्य अन्र्तराष्ट्रिय तथा खेलकुद प्रवास, कला तथा साहित्य
गजलः राराको सुन्दरता
ज्यानको रगत दिन्छु म राराको पानी संग !
घुलमिल हुन मन छ यो उसको कहानी संग!!
कति सुन्दर जंगल छ राराको वरपर,
परिचय खोल्दै छु म गजलको एसानी संग!
विदेशीले डलर तिरी रमाउन खोज्छन्य,
कर्णाली कै अप्सरा यी राराकी रानी संग!
बिहानीको सुनामी दिनमा निलो घाम हुदा,
मिसाउन मन छ रारा आखाको नानी संग!
जे सोच्छौ त्यो गर्छौ कर्णालीको भूमीमा,
किन जीवन दिन्छौ प्रवासकै	गजलः तिम्रो हासोँ एकातिर
राजन हमाल ठकुरी मुगु
मेरो रोदन् अनि तिम्रो हाँसो एका तिर !!
रमितेको छैन यहाँ खाँचो एका तिर !!
फूल्यो तिम्रो हृदयमा खुसी कति कति, मेरो भने दिल रह्यो बाँझो एका तिर !
तिम्ले छोडे पछि तितो बियोगले सदा,
मुटु भित्र जल्दै गयो राँको एका तिर !
सुन्दर फूल टिपि लग्यो पराइले चुम्दै, सुकि गयो उजाडिदै हाँगो एका तिर !
अतीत भुल्दै उमंगमा तिमी रम्दै हौली,
पार्दै बस्छु	‘दर्पण छायाँ–२’ का नायक पुष्पल भन्छन् – मिडियाले सोध्ने प्रश्न मन पर्दैन
काठमाडौं, फागुन १० – सिनेमा ‘दर्पण छायाँ–२’ का नायक पुष्पल खड्काले आफूलाई मिडियाले गर्ने कतिपय प्रश्न मन नपर्ने बताएका छन् । २ सय ५० भन्दा धेरै म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेका पुष्पलले मिडियाले आफूले सोध्ने कतिपय प्रश्न वाइयता लागेको बताए । खास गरी उनलाई ‘दर्पण छायाँ’ र ‘दर्पण छायाँ–२’ का कलाकारहरुलाई तुलना गरेर सोधिएका प्रश्नहरु मन पर्दैनन्	सुन साइँलीका गायक रानालाई शुभकामनाको ओइरो (With Video)
बर्दिया, १० फाल्गुन/रेडियो मुगु (गमगढी) सुन साइँली, साइँली, परदेशबाट म आउँला, सुन साइँली, साइँली, चालिस कटेसी रमाउँला...। यतिबेला यो गीत निकै चर्चित छ । बर्दियाको बबई नगरपालिका–३ कर्मलामा जन्मिएका गायक हेमन्त रानाको आवाज रहेको यो गीतमा विदेशमा रहेर काम गर्ने आम नेपालीले घरमा आफन्त अनि प्रियसीको सम्झनामा कस्ता खालका पीडा हुनछन् र कस्ता योजना बनाउँछन् भन्ने खालका	साहरुखको सेल्फीमा देखिएपछि भाइरल बनेकी साइमा
हुन त साइमा हुसेन र बलिउड अभिनेता साहरुख खानबीच कुनै नाता छैन। तर आफ्नो नयाँ फिल्म ‘रइस’को प्रचारका क्रममा शाहरुखले खिचेको सेल्फीको पछाडि एक हुल युवतीबीच साइमा पनि देखिएपछि अहिले यी युवती सोसियल मिडियामा 'भाइरल' बनेकी छिन्।
काश्मिरको राजधानी श्रीनगरवासी २१ वर्षे साइमा पढ्ने पुनास्थित सिम्बिओसिस कलेजमा शाहरुखले खिचेको तस्बिरको पृष्ठभूमिमा साइमा पनि अटाएकी थिइन्। साहरुखले	मणिपुरे ब्यान्डदेखि ‘ठमेल बजार’ आइटमसम्म
गायिका मिना पोखरेल भन्छिन्ः 'छोराछोरीले ‘ठमेल बजार’ गीतमा ‘मामु सँगै नाचुम् न’ भन्दा मेरा बचेखुचेका दुःख पखालिन्छन्
नयाँ नम्बरबाट फोन आयो कि आइटम गीत गाउने प्रस्ताव नै होला भनेर अचेल मिना सशंकित भइहाल्छिन्। ‘लुट २’को ‘ठमेल बजार’ गीतको बढ्दो चर्चापछि उनलाई यस्ता फोन आएको आएै छन्। ‘ठमेल बजार’ युट्युबमा छोटो समयमै ८० लाख भ्यूज नाघ्न सफल	नेपाली कथानक चलचित्र 'बागिघर' पुरा भिडियो हेर्नुहोस्
Films are the main source of entertainment. Actually films are created for social awareness. In the other hand films are created to represent various cultures, tradition, love, natural beauties, etc. “BAAZIGAR” is one of the most popular Nepali films of 2016. This film contains the love story of two lovers. We can say that this	सारीमै राम्री केकी !
अभिनेत्री केकी अधिकारीलाई तपाईँ पाइन्ट, गाउन र सारीमा के रोज्नुहुन्छ ? भनेर सोध्दा समय अनुसार ड्रेस रोज्ने बताउँछिन् । तर उनी प्राय आफूलाई गाउन र पाइन्टमा भन्दा पनि सारीमा सजाउन मन पराउँछिन् । छोटा लुगाप्रति त केकीलाई खासै रुचि छैन । उनी आफूले छोटा लुगा लगाएर आफ्नै बेइज्जत हुने पनि बताउँछिन् । उनलाई धेरैले अन्य ड्रेसहरुले	किन कमजोर छन् नेपाली सिनेमा ? खोइ ओस्कार अवार्ड !
काठमाडौं, माघ १३ – पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको संख्या र गुणस्तर दुबै वृद्धि भएको छ । मौलिक कथावस्तु, उत्कृष्ट अभिनयलगायत धेरै कुराले नेपाली चलचित्रप्रति दर्शकको ध्यान तान्न नेपाली चलचित्र जगत सफल हुँदै गएको छ ।
पशुपतिप्रसाद, कालो पोथी, कबड्डी कबड्डी जस्ता सिनेमालाई नेपाली दर्शकले मात्रै होइन विभिन्न देशका दर्शकले पनि रुचाए र तारिफ गरेका छन् ।	ज्योतिको पुरानै पारा, उनलाई हेर्न अन्तिमसम्म बसे दर्शक
बाँके, माघ १३ – छोटा पहिरनमा गीत गाउँदै दर्शक नचाउन सिपालु गायिका ज्योती मगरले बाँकेको खजुरामा बिहीबार पुरानै पारामा प्रस्तुति दिइन् । सबैभन्दा अन्तिममा प्रस्तुति दिन मञ्चमा आएकी ज्योती दर्शकको अपेक्षाझै छोटा पहिरनमा नै देखिइन् । ज्योतीले बेलुकाको समयमा खजुरा महोत्सवमा सहभागी सयौँ युवालाई आफूसँगै नचाइन् । उनले जिम्वाल बाको आँगनीमा, उही मुलाको सिन्की, मायालाई बैना	अहिले के गर्दै हुनुहुन्छबाट दिक्क भएकी नायिका केकी (भिडियोसहित)
काठमाडौं, पुस २५ – अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ? भनेर सोध्दा उनले भनिन् अहिले म सिनेमाको प्रचाप्रसारमा हिँडिराखेको छु । त्यसपछि हामीले उनलाई मिडियाको कुन प्रश्नले तपाई दिक्क हुनुहुन्छ भनेर सोध्दा जवाफमा उनले भनिन्, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसपछि उनी एकछिन मज्जाले हाँसिन् । किनकी हामीले पनि उनीसँग कुरा सुरु गर्दा त्यही प्रश्न गरेका थियौँ,	वरिष्ठ साहित्यकार कमलमणि दीक्षितको निधन
१४ पुष/रेडियो मुगु (गमगढी)
काठमाडौं: नेपाली भाषा–साहित्यसेवी कमलमणि दीक्षितको ८६ वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको छ । श्वासप्रश्वासको समस्याबाट पीडित उनको ललितपुरको बीएन्डबी अस्पतालमा उपचार भइरहेकोमा उपचारकै क्रममा बिहान दुई बजेर ४५ मिनेटमा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । तीन महिनायता फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित उनलाई गाह्रो भएपछि गत सोमबार अस्पताल लगिएको थियो ।
मदन पुरस्कार गुठीले शोक विज्ञप्ति	दीपकबाहेकको अरु व्यक्तिले आकर्षित नै गरेन!!! बिहे नगर्ने मुडमा दिपाश्री निरौला…
कलाकार दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाबीच २३ वर्षदेखि मित्रता कायम छ । दीपा नाट्यकर्मी, आरजे, हास्यअभिनेत्री हुँदै निर्देशक बनेकी छिन् । दीपाले निर्देशन गरेको ‘छक्का पन्जा’ चलचित्रले प्रदर्शनीको सयौँ दिन पूरा गरेको छ । दीपकराज नाट्यकर्मी, आरजे, हास्यअभिनेता हुँदै निर्माता बनेका छन् । साढे दुई दशकदेखिको उनीहरूको सम्बन्ध फेरिएको छैन । ‘रिल लाइफ’ मा मात्र	गायिका खिमा सापकोटा ले गायक मिलन लामा लाई ढटुवा को आरोप लगाइन (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
प्रकाश योगी पछिल्लो समय मा नेपाली लोकदोहरी क्षेत्रमा स्थापित हुन लागेको एउटा नाम हो खिमा सापकोटा ।भर्खरै मात्र उन को नया गित (बटुवा ) बजार मा सार्बजनिक भयको गित मा चर्चित गायक मिलन लामा को शब्द लय रहेको छ भने मिलन लामा र खिमा सापकोटा को स्वर रहेको छ ।बिरेन्द्र भाट को छयाङकन रहेको गित	हल्ला ज्यादा, उपलब्धि शून्य: चर्चित कलाकार कुन पार्टीमा ? काठमाडौं, मंसिर २७ – केही दिनअघि मात्रै गायिका तथा सञ्चारकर्मी कोमल वली राप्रपा पार्टीमा प्रवेश गरिन् । नयाँ शक्तिबाट पनि निम्ता पाएकी कोमलले राप्रपा मन परेका कारण नयाँ शक्तिमा नगई राप्रपामा गएको खुलाइन् । कोमल वलीसँगै नायिका रेखा थापा पनि राप्रपा पार्टीमा प्रवेश गर्न लागेको चर्चा थियो । तर रेखाले केही मिडियाहरुसँग कुराकानी गर्दै पार्टीमा प्रवेश	फिल्म ईन्डष्ट्रिमा आएपछि नाम परिवर्तन गर्ने नायिकाहरु,के थियो पहिलेको नाम?
हाम्रो फिल्म उद्योगमा पनि बलिउडका कलाकारहरु जस्तै ग्ल्यामर फिल्डमा आईसकेका केही कलाकारहरुले फिल्ड सँगै मिल्दो जुल्दो आफ्नो नाम परिवर्तन गरेका केही उदाहरण छन् । हाम्रा फिल्म उद्योगका केहि चर्चीत कलकारहरुले पनि ग्ल्यामर फिल्डमा आईसकेपछि आफ्नो नाम परिवर्तन गरेका छन् । आज हामीले यसै बिषयमा नेपाली फिल्म ईन्डष्ट्रिका नाम चलेका अभिनेत्रीहरुको परिवर्तीत नामको बारेमा चर्चा गर्दैछौं	जापानबाट सोल्टिीनी लिएर आए युवा गायक कर्म दोङ
काठमाडौं । युवा गायक कर्म दोङ तामाङले आफ्नो पछिल्लो एल्वम कर्मभित्र संग्रहित सोल्टीनी बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् ।
अर्का गायक आसुसेन लामाको शब्द तथा संगीत रहेको यो गीतको म्यूजिक भिडियोमा भिजे तथा मोडल सोनाम पाख्रिनले अभिनय गरेका छन् । उनीसँग मिस तामाङ २०१२ र मिस नेपालकी टप फाइनलिष्ट मोडल सुमी मोक्तानले पनि स्क्रिन	शाहरुख खान र ऋतिक रोशन बक्स अफिसमा भिड्दै, रईसको निर्माता रोकश भए निराश
काबिल फिल्म र रईस फिल्मको रिलीज डेटको बारेमा चलिरहेको बिबाद टुङ्गिएको छ । यसै बिबादलाई लिएर निर्माता राकेश रोशन भने अभिनेता शाहरु खान सँग निकै निराश छन् । त्यस्तै उनको निराशापनमा अभिनेता खानले पनि केही प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अभिनेता शाहरु खान र अर्को अभिनेता ऋतिक रोशनको फिल्म आउँदो जनावरीको २६ तारीख बाट दर्शकमाझ रिलीजमा आउने	हिंसाबाट उदाएको ‘सेतो सूर्य’
शंखध्वनी बज्छ। शव उठाउनै लाग्दा कान्छो छोराले भित्रबाट एउटा झन्डा लिएर आउँछ। ‘बुबाको अन्तिम इच्छा थियो,’ भन्दै राप्रपा (नेपाल) को त्यो झन्डा शवमाथि ओढाइदिन्छ। शव उठाउनै लागेका ठूलो छोरालाई त्यो सह्य हुँदैन। थुतेर फालिदिन्छ।
बाबुको शव छेउमा दुईवटा छोराको घम्साघम्सी पर्नै लागेका बेला गाउँले अलमलमा पर्छन्। गाउँले भन्नु त के? उही कुरेर बसेका बूढापाका, महिला र केटाकेटी। सेनामा	चिरिएका साँझहरू: देवतासँग नहार्ने मान्छेका कथा
भक्तपुर राज्यकी सुन्दरी राजकुमारी मयाजु हरेक रात दुलही बनेर सुत्छे र हरेक दिन बिहान उठ्दा विधवा बन्छे। मयाजुको जीवनमा निरन्तर घटिरहेको यो पहेलीले राज्यका युवाहरू सक्किदै छन्। यो घटना किन र के कारणले घटिरहेको छ? कसैलाई पत्तो छैन्।
यीनै प्रश्नहरूको भुमरीको वरीपरि घुमेको छ अभि सुबेदी लिखित 'चिरिएका साँझहरू' जसको नियमित मञ्चन शिल्पी थिएटरको गोठाले नाटक	12Next प्रमुख समाचार